Canya i-Tomato Caste, i-Sachet Tomato Cola-i-Tomato
"Eyona nto iRawusti eNgcono yokwenza eyona ncasa ilungileyo!" SinoLawulo oluPhezulu loMgangatho kwiMveliso
Izinto zokwenza imveliso, Tin, ibhokisi
Isiqinisekiso ＆ Ingxelo
I-Gulfood eDubai, i-SIAL eFrance, iAnuga ngesiJamani, iCanton Fair njl
"Umgangatho Kuqala" Uhlala Ungumgaqo Wethu Ukwenza Inkqubo yeTamatato.
Inkqubo kunye nokubonelela ngeNkonzo yokuDidi lokuQala kubaThengi ngoNcedo oluQinisekileyo lobuGcisa. Sinqwenela ukwandisa iiMakethe ezininzi kunye nabahlobo abasehlabathini ukudala ikamva eliqaqambileyo kwisiseko seZibonelelo eziManyeneyo.
Kwinkqubo Production, Siya kwenza Zonke iintlobo Of Umsebenzi Monitoring Phambi, Ngexesha Kwaye Emva Production, Kwaye Qinisekisa ukuba Abathengi Ngaba Ngokwenene Nandipha "Grade" wathembisa kuthi.
Utamatisi uncamathele Xa sisenza iitumato ezityumkileyo zibe yincasa eshinyeneyo kunye nokuxinana kokuxinana, le fomu yaziwa njenge-tomato paste. Singayisebenzisa le nto ...
Uyintoni umahluko wetumato elidlulileyo ...
U-Hebei Tomato wahlulahlula eyona misebenzi mihle yokwakha iqela lonyaka ukusukela nge-9 ukuya kwi-13 ka-Agasti, 2019.
Hebei Utamatisi 2019 iqela acti ...